Anigu waxaan isweydiiyay su’aashan laba sano ka hor (da’da 32 jir).
Iyada oo bilowday inay si firfircoon uga barato luuqad cusub oo ka soo baxaysa xoqan, waxaan ku soo koobay saddex dhibaatooyin waaweyn:
1. Hagaajinta ereyada iyo kaydinta ereyada adag ee la xariira
2. Waqti la’aanta barashada luuqadaha shisheeye
3. Sida loo helo dadka ku hadla afkooda hooyo si loo barto luuqada
Si loo gaaro natiijo wanaagsan, waxaan u egahay, qof kasta oo kale oo baranaya luuqad shisheeye, inuu xalliyo dhibaatooyinkaas.
Bilowgii, waxaan bilaabay inaan isticmaalo habka ugu caansan ee ballaadhinta eraygeyga adoo isticmaalaya kaararka elektarooniga ah, halkaas oo hal dhinac aan kuqornay ereyga Ingiriisiga, iyo dhinaca kale ee tarjumaadda. Dhowr bilood ka dib, waxaan soo uruuriyay dhowr boqol oo kaarar oo casri ah, kuwaas oo aad u dhib badanaa in ay qaadaan. Ka dib markii aan go’aansaday in aan isticmaalo codsigeyga mobile si fudud, laakiin markii la baaray badeecooyinka la heli karo wakhtigaas oo suuqa, aniga ma heli karay arji igu sahlan aniga iyo aniga.
Nasiib wanaag, waxaan lahaa waayo-aragnimo horumarinta software waxaanan doonayay in aan dhisto qalab wax ku ool ah ee adeegsiga shakhsi ahaaneed. Iyada oo ah taageere ka mid ah nidaamka hawlgalka Android, waxaan si madaxbannaan u bilowday horumarinta version ugu horeysay ee LingoCard ee casriga ah iyo dhowr bilood oo codsiga koowaad ee leh kaararka luqadda iyo hal daraasad (hal dush oo kaarar ah) ayaa diyaar ah. Later, waxaan lahaa rabitaan ah inaan sameeyo kaarar kuwaas oo kuxiran erayada iyo awoodda loo leeyahay in la abuuro xogta macluumaadka ugu badan ee la isticmaalay. Waxaan bilaabay inaan ka doodo ikhtiyaarka fulinta iyada oo lala yeesho horumarinta xirfadlayaasha. Dadku waxay jecelyihiin fikradayda, sababtoo ah taageerayaashu waxay bilaabeen inay ku biiraan mashruuca. Ka dib markii ay fulinayaan fikradaha cusub, waxaan go’aansanay inaanan joojin halkaa iyo horumarinta dhowr qalab oo u gaar ah laba nidaam hawlgal: Android iyo iOS. Waxaan ku soo bandhigay barnaamijkayaga Google Play iyo Apple Store lacag la’aan.
Muddo dhowr bilood ah, tobanaan kun oo qof oo adduunka ah ayaa bilaabay inay adeegsadaan appka, waxaana ku helnay xarfo badan oo mahad-celin ah, calaamadaha qaladaadka iyo sidoo kale fikrado lagu hagaajinayo alaabta aan u mahad celino. Natiijo ahaan, waxaanu isku duubnay hawlo ku filan iyo fikrado cusub oo horumarineed si aan u qabanno dhawr sano oo ugu yaraan.
Markaad adigu ku kalsoontahay jawiga luqadda waxaad fahamsan tahay sida ay muhiim u tahay in si dhakhso ah loo dhiso jumlado. Waa awooda lagu fahmi karo weedhaha iyo weedhaha aasaasiga ah ee ka dhigaya hadalkaaga la aqbali karo ee wada hadalka iyo turjumaadda degdegga ah. Sidaa daraadeed, waxaan go’aansanay inaan kaararka kaararka ku jira jumlado, odhaaho iyo sheekooyin. Waqti xaadirka, waxaad heli kartaa boqolaal kun oo kaararka luqadaha sida oo ku jira weedho iyo weedho wax ku ool ah oo ku jira codsigeena.
Ka shaqaynta dhibaatada la’aanta waqtiga waxbarashada, waxaan go’aansannay inaan abuurno ciyaaryahan codad gaar ah leh oo ku dhawaaqaya qoraal kasta iyo kaarar kasta oo loo sameeyay amar gooni ah, iyada oo la beddelayo erayada ajnabiga ah iyo tarjumadooda. Natiijo ahaan, Ingiriis ayaa loo baran karaa si la mid ah dhageysiga muusigga meel kasta iyo waqti kasta. Hadda qalabkan waxaa la siiyaa awooda lagu dhageysto illaa 40-50 luqadood oo ajnebi ah, iyadoo ku xiran qalabka iyo moobilka loo isticmaalo. Waxaan u maleynayaa in mar uun qaar ka mid ah mustaqbalka dhaw uu ciyaaryahanku awoodi doono inuu la shaqeeyo dhammaan luqadaha la yaqaan.
Si loo xalliyo dhibaatada haysashada dhalashada afka hooyo ee loogu talagalay ficil ahaan, waxaan ku hawlanahay sameynta shabakad bulsho iyo horumarinta algorithms gaar ah ee shabakadan si loo xiro qof kasta oo isticmaalaya qof ku hadla afkooda ama khabiir ku takhasustay.
Dhamaan qalabkeena barashada oo dhan hal isku dhafan, waxaan abuuri doonaa barmaamij waxbarasho oo caalami ah oo lagu baranayo luqad shisheeye oo leh caawimo dadka jinsiyada ah.